Isqorida Kindergartenka | Bloomington Public Schools - District #271
Home / Iskuulka / Isqorida Kindergartenka
Iskuuladka Bloomington uduyargrowga maxadka iyo shaqadaba horay ayey u sii bilawan.
Kabilawida Kindergarten iskuuladka Bloomington waxad fursad u yeelaneysa in aad barato hor u dhaca sida wax loo aqriyo. Fasalada kindergartenka waxaa yaala waxyaba technology fiican oo ay ka mid yihiin waxa la yirahdo white boards iyo iTouches taso ciyalka u fududenayso wax barashadoda
Habka uu u shaqeyo isdiiwan galinta
Qoosaska dhan ee dagan Bloomington heystana ilmo diyar u ah inay aadan Kindergarten waxaa bashqad u soo diro iskuulka xaafadooda ku yaal ama iskuulka bulshada ee layirahdo Hillcrest horanta bisha koowad. Fadlan bashqadas si foojiksan u baar si aad uga hesho aqbaaro aad cunugada ku diiwan galiso sanadka 2012-13.
Markad u diyar garowaysid diiwan galinta cunugada kindergartenka, fadlan sii diyarso waxyabaha soo socda:
Dowlada Minnesota waxay qasbaysa in la qaado imtixanka Baaritanka hore ee Caruurta/Early Childhood Screening. Hadanan cunugada wali laga qadin oona looga qadin meesha layirahdo Pond Center, fatlan wac 952-681-6200 si aad balan uga qabsatid.
Talalka waa inuu ahada mid marwalba laga qaado. Waa in talaladan ka mid ahadan Cagaarshow B, Busbus/Varivax (chicken pox), Canun xanun, Xiiqdheer, Taytano iyo Dabayl/DPT, and Polio. Fadlan cunugada u balanso in la siiyo taladan intan lagarin bisha labaad. Waxaa kaloo laga rabaya warqada dhalashada.
Waxaa jira wax layirahdo KinderPlus oo ah maalinta oo dhan. KinderPlus waa lacag waxadna la baxaysa lacag dhan bishii $390.
Isqorida Xiliga Kuleelaha
Hadad u baahantahay in aad hesho maclumad ku saabsan sided u diiwan galin lahayd cunugada dhigta kindergarten ila iyo fasalka 5nad, fadlan laxirir Brenda Wibbens Xarunta Shaqalaha Waxbarashada 952-681-6478 a ama bwibbens@isd271.org